AC Milan oo hal arrin ugu sacbisay Inter Milan!! – Gool FM
AC Milan oo hal arrin ugu sacbisay Inter Milan!!
Raage September 16, 2017
(Milano) 16 Sebt 2017 – Kooxaha AC Milan & Inter Milan ayaa caalamka oo idil laga ogsoon yahay xafiiltanka ciyaareed ee ka dhexeeya, maaddaama ay ka wada dhisan yihiin caasimadda xarragada Talyaaniga ee Milano.
Yeelkeede, waloow ay xafiiltamaan misna waxaa lagu yaqaannaa inay xirfadlenimo iyo ciyaar wanaag muujiyaan marka ay ciyaarayaan, iyadoo aan inta badan wax shilal ihi ka dhicin kulamada ay ciyaaraan.
Haddaba, haatan maxaa dhacay? Kooxda Inter Milan ayaa farriin samadoon ah u dirtay laacibka da’da yar ee dadabka midig uga dheelakooxda AC Milan ee Andrea Conti, iyadoo boggeeda rasmiga ah ee ay Twitter ku leedahay nasiib wanaag ugu rajeeysay laacibka oo Jimcihii dhaawacmay muddo 6 bilood ahna garoomada ka maqnaanaya.
Kooxda AC Milan oo tillaabadaa niyad wanaagga ee ilma adeeradood ka jawaabaysa ayaa iyaduna sacab uga jawaabtey farriinta Inter Milan.
GOOGOOSKA: AS Roma vs Verona 3-0 (Roma oo Verona ka ribixday)
HORDHAC: Real Sociedad vs Real Madrid